Banaanbax looga soo horjeedo afgembigii fashilmay ee Turkiga oo Muqdisho ka dhacay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBanaanbax looga soo horjeedo afgembigii fashilmay ee Turkiga oo Muqdisho ka dhacay
July 16, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Banaanbaxa looga soo horjeedo afgembiga fashilmay ee Turkiga oo Muqdisho ka socda. Sawirka: Facebook.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Banaanbax balaaran oo looga soo horjeedo afgembii fashilmay ee ka dhacay dalka Turkiga ayaa maanta ka socda caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Banaanbaxa ayaa waxaa ka qayb galaya boqolaal shacab ah oo wata calanka Turkiga iyo kan qaranka Soomaaliya, dadka ayaa muujinaya dareenkooda sida ay uga xunyihiin inqilaabka.
Banaanbaxayaasha ayaa isugu soo uruuray Daljirka Daahsoon halkaas oo la filayo in ay ku la hadlaan masuuliyiinta dowlada.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaareeyay inqilaabkii fashilmay ee lagu doonayay in xukunka looga tuuro Madaxweyne Rajib Dayib Erdogan.
September 24, 2016 Al-Shabaab oo sheegtay in ciidamo katirsan DFS ay isku-soo dhiibeen
July 16, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay isku daygii afgembi ee ka dhacay Turkiga
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciyaartowga kubada cagta Puntland ayaa gaaray final kadib markii ay 1-0 ku garaaceen martigeliyaha Banaadir ee tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya ee ka socda Muqdisho. Goosha waxaa Puntland u dhaliyay weeraryahan Yacquub Cusmaan qeybtii [...]